It is me. Ko Niknayman.: ကွာတာလေကြောင်းလိုင်းက မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်တွေကို မပြေးတော့ပါ။
ကွာတာလေကြောင်းလိုင်းက မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်တွေကို ခေတ္တရပ်ထားပြီး၊ ရှေ့ နှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၂၀) ရက်နေ့ ကနေ အချိန်အကန့် အသတ်မရှိ ရပ်ထားမယ်လို့သိရပါတယ်။
Posted by Ko Niknayman at 10:51 PM